Ndezvipi nzira dzekugadzira nzvimbo yakakwirira yeR PR backlink?
Mashizimisi ose akaiswa muIndaneti anoda shanho yekutsvaga kutengesa kutsvaga peji yekutanga kana yechipiri peji yekutsvaga. Zvose zvinotsvaga injini yekugadzirisa nzira inoda zvakasiyana-siyana zvemashure. Muchiedza chekupedzisira kweGoogle misarudzo, idzi backlink dzinoda kuva yakakwirira yepamusoro uye dzinobva kumaWebsite maR PR. Chero dzimwe sarlinks inoonekwa sechepasi yepamusoro uye spammy. Ndosaka webmaster imwe neimwe inofanirwa kunyatsochenjerera pamusoro pehutano hwemashure rekugadzirisa iyo inovaka hutano hwehutano husinganzwisisi hunoona nzvimbo yako nzvimbo ichagadzirisa mukati mitsva yekutsvaga yemamwe mazwi emashoko makuru.
Saka mubvunzo ndewokuti ungagadzira sei PR PR backlink nzvimbo dzisina kukanganisa mari yakawanda uye kuedza?
Kana zvasvika pakushandisa webhusaiti pazvinjini dzekutengesa, mutemo we 4 V uri kushanda zvakanakisisa:
Nhamba yezvibatanidza zvinoratidza kuwanikwa kwewebhu yako. Icho chichiri chinhu chakakosha chikamu. Zvisinei, iwe unofanirwa kuyeuka kuti mazhinji backlinks kubva kune spammy websites, haingakupi iwe purofiti.
. Kunyanya, zviri nani sezvazvinoratidzwa neGoogle kuti mawebhusayithi akawanda anotora chivako chako seye anoyemekedzwa uye unhu hunokosha.
. Google inogona kuiwana ichifungira kana iwe ukavaka mashure akawanda kumashure usiku. Panzvimbo yazvo, iwe unofanirwa kuumba unhu hwakanaka huripo nguva dzose.
Rugwaro rwekunyorera pahungano kune site yako. Iyi nyanzvi inoda kunyatsogadzirwa, kubata uye kuva neimwe yezvaunotsvaga kutsvaga mazwi.
Nhamba yepamusoro yeZP dzekuvakisa kumashure kwepamusoro
Mawebsite anotevera ndiwo mavambo akakwana emushandirapamwe wekudzokera shure:
Ndiyo yepamusoro yePeRank social social platform inopa vadzidzisi webhusaiti vane mikana yakawanda yekusimudzira mabhizinesi. Chimwe chekuderera kwepuratifomu iyi ndeyekuti vane "hapana-kutevera" chikwata chekuvaka chikwata. Zvinoreva kuti zvakagadziriswa backlinks kubva pa Facebook hazvisi kupfuudza chero jisi rekugadzirisa kunzvimbo yako. Zvisinei, backlinks kubva kune ino inogona kuita kuti purogiramu yako yekubatanidza iwedzere kutendeka uye ine simba mumaziso eGoogle.
Yepanzvimbo yePR9 iyo inowanikwa neGoogle. Inopa webmasters nezvose zvinotevera uye nofollow backlinks. Iwe unogona kugadzira dofollow backlinks mubhizimisi rako rebhizimisi kana tsanangudzo yevhidhiyo. Zvimwe zvose zvigaro zvichange zvisingabvi. Mashoko akanaka ndeokuti iwe unokwanisa kutora chiteshi chako cheYouTube kuva PR5 chete kusvika PR6 backlink. Inogona kuchinja zvakanaka nzvimbo yako.
Google+ ndiyo PR8 web source. Ndiyo mhinduro yeGoogle kune Facebook. Pano iwe unogona kuumba kana imwe yefollow backlinks kunzvimbo yako. Iko mukana wakaisvonaka wekutsvaga nzvimbo yako sezvo Google inoshandisa peji iyi sechikamu chegorongwa hwavo. Ndokusaka zvakakosha kugadzira peji yeGoogle + iyo inosanganisira magwaro anchor uye tsvakurudzo yako inotsanangurwa muNhau / Nezvemunharaunda Source .